Fanomezana tsara tarehy - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2018-03 > Fanomezana tsara
Ny apostoly James dia nanoratra ao amin'ny tariny hoe: «Ny fanomezana tsara rehetra sy ny fanomezana tonga lafatra rehetra nidina avy any ambony, avy amin'ny rain'ny mazava, izay tsy misy fiovana na fanovana fahazavana sy maizina» (Jakoba 1,17).
Rehefa mibanjina ireo fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra aho dia mahita fa mamoaka fiainana izy. Ny hazavana, ny voninahitry ny natiora, ny fiposahan'ny volamena, ny loko mamirapiratra amin'ny masoandro eo ambonin'ny tampon-dranona misy kodiarana, ny maintso maniry any anaty ala, ny ranomasina loko amin'ny kianja feno voninkazo. Mahita zavatra maro hafa izay ankafahintsika rehetra raha toa ka manokana fotoana ho azy ireo isika. Manome antsika betsaka ireo zavatra rehetra ireo Andriamanitra, na inona na inona finoana anananao. Ny mpino, ny tsy mino an'Andriamanitra, ny agnostika, ny tsy mpino ary ny mpino hafa, izy rehetra dia afaka mahazo ireo fanomezana tsara ireo. Andriamanitra mampilatsaka ny orana amin'ny marina sy ny tsy marina. Manome ireo fanomezana tsara ireo ho an'ny olona rehetra izy.
Saintsaino izay fahaiza-manao mahavariana amin'ny olona, ​​na eo amin'ny sehatry ny teknolojia, fananganana, fanatanjahan-tena, mozika, literatiora, ny zava-kanto ary tsy hita ny lisitra. Nomen'Andriamanitra fahaiza-manao amin'ny olona rehetra. Ny olona avy amin'ny fiandohana rehetra dia nahazo fitahiana be dia be. Avy aiza ny fahaiza-manao avy aminy, raha tsy avy amin'ny Rain'ny Fahazavana, izay manome ny fanomezana tsara rehetra?
Etsy ankilany, be ny fijaliana sy ny alahelo eto amin'izao tontolo izao. Voasarika ho isan’ny fankahalana, ny fitiavam-bola, ny lozisialy ary ny zavatra miteraka fahoriana lehibe ny olona. Ianao ihany no mila mijery an'izao tontolo izao sy ny fomba firaharany ara-politika mba hahitana ny maha-zava-dehibe azy izany. Hitantsika ny tsara sy ny ratsy eo amin'izao tontolo izao ary ny toetran'ny olombelona.
Inona ny fanomezana mahafinaritra omen'Andriamanitra ny mpino izay mifanena amin'ny tsara sy ratsy eto amin'ity tontolo ity? Ireo no olona izay nitodihan'i James handrisika azy ireo hahita izany ho antony tena miavaka ho sambatra rehefa tsy maintsy mandia fitsapana isan-karazany izy ireo.
Voalohany indrindra aloha dia hoy ny tenin'i Jesoa fa izay mino ny Zanaka lahitokan'Andriamanitra dia voavonjy. Voavonjy amin'ny inona? Voavonjy amin'ny tambin'ny ota izy, dia ny fahafatesana mandrakizay. Tahaka izany koa, i Jesosy dia niresaka momba ny mpamory hetra izay mijanona ao amin'ny tempoly ary mitsoka amin'ny tratrany ary nilaza hoe: "Andriamanitra mamindra fo amiko, mpanota!" Lazaiko aminareo: Nidina nody tany an-tranony izy (Lioka 18,1314).
Azo antoka ny famelan-keloka
Mampalahelo fa noho ny hadisoana nataontsika dia miady amin'ny fiainana amin'ny fahamelohana aho. Ny sasany dia manandrana manamarina ny helony, fa mbola mijanona ho azy ihany.
Betsaka ny antony mahatonga ny fahadisoantsika taloha tsy mamela antsika ho irery. Izany no antony mahatonga ny olona sasany mankany amin'ny psikolojia mba hitady vahaolana. Tsy misy ny torohevitry ny olombelona afaka manao izay avelan'ny fandatsahan-dran'i Jesosy. Amin'ny alalàn'i Jesosy ihany no ahafahantsika mahazo antoka fa voavela ny zava-drehetra, amin'ny lasa sy ankehitriny ary na amin'ny ho avy aza. Afaka ao amin'i Kristy ihany isika. Araka ny nolazain'i Paoly, dia tsy misy fanamelohana ho an'ireo izay ao amin'i Kristy (Romana 8,1).
Ankoatr'izay, dia manana toky isika fa raha manota indray ary "miaiky ny fahotantsika, mahatoky sy marina izy, fa hamela antsika ny fahotantsika ary hanadio antsika amin'ny tsy fahamarinana rehetra" (1 Jaona 1,9).
Jesosy koa dia nilaza fa ny Rain'ny Fahazavana sy Mpanome fanomezana Tsara dia hanome antsika ny fanomezana ny Fanahy Masina - mihoatra lavitra noho izay azon'ny ray aman-dreny olombelona atao. Nanome toky ny mpianany izy fa handeha izy, saingy efa tanteraka ny fampanantenan-drainy, araka ny faminaniana ao amin'ny Joela 3,1, izay nitranga tamin'ny Pentekosta. Nidina taminy ny Fanahy Masina ary efa tao ary niaraka tamin'ireo kristiana mino rehetra hatramin'izay.
Rehefa manaiky an'i Kristy isika ary mandray ny Fanahy Masina dia tsy nahazo tahotra isika, fa fanahin'ny hery, ny fitiavana, ary ny fahakingana. (2 Timoty 1,7). Io hery io dia ahafahantsika manohitra ny fanafihan-dratsy, manohitra azy, ka dia mandositra antsika izy.
Ny Galatiana 5,22: 23-1 dia mamaritra ny vokatry ny Fanahy Masina ao amintsika. Misy endrika sivy amin'ity voankazo ity, atomboka amin'ny fitiavana ao anaty fitiavana. Satria tian'i Jehovah aloha isika, dia afaka "tia ny Tompo Andriamanitsika amin'ny fontsika rehetra sy ny namantsika tahaka ny tenantsika". Tena zava-dehibe ny fitiavana hany ka nanoratra famaritana momba izany ao amin'ny 13 Korintiana i Paoly ary namariparitra hoe inona no azontsika ianarana amin'izany. Nofeheziny fa misy zavatra telo mijanona - finoana, fanantenana ary fitiavana, fa ny fitiavana no lehibe indrindra amin'izy ireo.
Ny fahatsapan-tena iraisana
Izany dia mamela antsika hiaina toy ny zanak'Andriamanitra velona amin'ny fanantenana famonjena, famonjena ary fiainana mandrakizay. Rehefa mijaly ny olana dia mety ho lasa misavoritaka isika ary tsy hanary toky intsony fa raha miandry ny Tompo isika dia hitondra antsika.
Rehefa afaka fitopolo taona tsara izay nahafahako nitondra fiainam-pitahiana tamin'ny naha-Kristiana nanolo-tena ahy, dia afaka nifanaraka tamin'ny tenin'i David mpanjaka aho hoe: "Ny marina tsy maintsy hijaly mafy, fa ny Tompo kosa manampy azy amin'izany rehetra izany" (Salamo 34,20). Nisy fotoana tsy haiko ny nivavaka, ka tsy maintsy niandry mangina aho ary rehefa nitodika ny lasa aho dia afaka mahita fa tsy irery aho. Na dia nanontany momba ny fisian'Andriamanitra aza aho, dia niandry tamim-paharetana izy hanampy ahy hivoaka amin'ny krizy ary navelany hijeriko aho mba hahitako ny halehiben'ny voninahiny sy ny zavatra noforoniny. Tao anatin'ny toe-javatra toy izany dia nanontany an'i Joba izy: "Taiza ianao tamin'ny nanorenako ny tany?" (Joba 38,4).
Hoy koa i Jesosy: «Avelako ho aminareo ny fiadanako, omeko anareo ny fiadanako. […] Tsy matahotra ny fony ary tsy matahotra » (Jaona 14,27). Amin'ny fotoan-tsarotra indrindra, dia manome antsika fiadanana izay mihoatra lavitra amin'ny fahatakarana.
Ankoatr'izay, manome antsika fiainana mandrakizay izy ho fanomezana lehibe indrindra sy fanantenana feno fifaliana ho miaraka aminy mandrakizay, izay tsy hisy intsony ny fijaliana sy ny fanaintainana ary ny ranomaso rehetra dia hofafany (Apokalypsy 21,4).
Ny famonjena, ny famelan-keloka, ny fandriam-pahalemana, ny fanantenana, ny fitiavana ary ny fahatsapana iraisana dia vitsivitsy monja amin'ireo fanomezana tsara nampanantenaina ny mpino. Tena misy ianao. Tena marina noho i Jesosy rehetra i Jesosy. Famonjenantsika, famelan-kelokantsika, fiadanantsika, fanantenantsika, fitiavana ary fahatsapanay iraisana - ilay fanomezana tsara indrindra sy tonga lafatra izay avy amin'ny Ray.
Ny olona tsy mpino, na tsy mino an'Andriamanitra, na agnostika na mpino hafa, dia tokony hankafy ireo fanomezana tsara ireo ihany koa. Amin'ny fanekena ny tolotra famonjena amin'ny alàlan'ny fahafatesana sy fitsanganan'i Jesosy Kristy ary matoky fa hanome azy ireo ny Fanahy Masina Andriamanitra dia hanana fiainana vaovao sy fifandraisana masina miaraka amin'ilay Andriamanitra telo izay manome ny fanomezana tsara rehetra. Ny safidy dia anao.
nataon'i Eben D. Jacobs